Ma Dhihi Karo Liverpool Waa Koox Weyn Ilaa Iyo Ay Ku
Patrice Evra ayaa sheegay in kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool inaan lagu tilmaami karin koox weyn ilaa iyo ay seddex jeer oo isku xigta ku guuleystaan horyaalka Premier League.
Reds ayaa si raaxo leh u garaacday Leicester City iyagoo ku badiyay 3-0 islamarkaana ku dhibco noqday kooxda hogaamineysa horyaalka ee Tottenham.
Guushaan waxay sii dheereysay rikoodhka guuldarro la’aanta Liverpool ee gurigooda iyadoo aan laga badinin 64 kulan oo ay ku ciyaareen Anfield horyaalka Premier League iyagoo jabiyay rikoodhkoodii hore ee ay dhigeen 40 sannadood ka hor.
Laakiin daaficii hore ee Manchester United Patrice Evra ayaa aaminsan in xiddigaha haatan ee Liverpool aan lagu tilmaami karin xiddigihii ugu fiicnaa abid ilaa iyo inay si joogta ah koobab u keenaan Anfield.
Ninka reer France ayaa u sheegay Sky Sports: “Waxaan u baahanahay inaan isdejino, kaliya waa sagaal kulan. Waxaan ugu yeeri doonaa koox weyn marka ay seddex horyaal oo isku xigta ku guuleystaan.
“Haddii aysan ku guuleysan sannadkan, uguma yeeri doono koox weyn – waa inay si joogta ah ugu guuleystaan horyaalka sannadba sannadka ku xiga – waa markaas marka aan ugu yeeri doono kooxdii weyneyd ee Liverpool.
“Koox badan oo hore ayaa sameeyay sidaasi, waxaan ugu yeeri doonaa kooxdii ugu fiicneyd ee Liverpool marka ay seddex horyaal oo isku xigta ku guuleystaan.”